काठमाडौं, ९ वैशाख । सत्तारुढ नेकपा (एमाले) अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेता माधवकुमार नेपालबीच लामो समयको संवादहीनता तोडिएको छ । नेताद्वयको बुधबार भएको भेटवार्तालाई विभिन्न जोड र कोणसहित टिप्पणी भइरहेका छन् ।
भेटवार्तामा के भएको थियो भन्ने विषय बाहिर आइसकेको छैन । मेरियत होटलमा नेताद्वयबीच वार्ता चलिरहँदा केपी ओलीका प्रतिनिधि विष्णु पौडेल र शेरबहादुर देउवाका प्रतिनिधि बालकृष्ण खाँणबीच पनि केही समय छलफल चलिरहेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली माधव समूहलाई कारबाही गर्दा पनि अप्ठेरोमा नगर्दा पनि अप्ठेरोमा पर्ने देखिएपछि ओली पुनः नेपाललाई फकाउने रणनीतिमा लागेको विश्लेषण एकातिर छ भने अर्कोतिर कांग्रेस सभापति देउवालाई पनि सहमतिमा लिएर निर्वाचनमा जाने र कांग्रेसको साथमा एमसीसी पास गर्ने रणनीति पनि हुनसक्ने आंकलन गरिएको छ ।
बुधबार बिहान बुढानीलकण्ठमा पार्टीभित्रकै नेताहरुको पेलानमा परेर सभापति देउवा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन तयार भए पछि ओली हच्किएको बालुवाटार स्रोतले बतायो । देउवाको प्रतिनिधिलाई पनि एकैठाउँमा बोलाएर पार्टीभित्रको विद्रोही नेतालाई बोलाएर वार्ता गर्दा दुवै पक्षलाई गाल्न सजिलो हुने ओली समूहको बुझाई छ ।
देउवालाई माधवजी नजिक नै हुनुहुन्छ भन्ने सन्देश दिएर चुनावका लागि सहमत गराउने र माधवलाई कांग्रेस चुनावमा जान तयार छ, तपाईं के गर्नुहुन्छ ? भनेर हच्काउने बालुवाटारको रणनीति रहेको बताइन्छ ।
यी सबै सन्दर्भमा भएको चाहिँ के हो त ? बालुवाटार स्रोत भन्छ- सरकार जोगाउन एमाले काँक्रो चिरेजस्तो चिरिने अवस्था एकातिर भने अर्कोतिर देउवा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन तयार हुने अवस्था आउँदा नेपालको शरणमा जानुको विकल्प ओलीसँग के छ र ?